Fitaovana 3 hahafantarana ny fitaovan'ny rafitrao | Avy amin'ny Linux
Ya hitanay imbetsaka amin'ny fomba hahazoana vaovao momba ny Hardware ampiasaina, indrindra avy amin'ny terminal. Manolotra izahay anio Fitaovana sary 3 izay safidy hafa mitombina ihany ho an'ireo vao tonga na ireo izay tia ny fampiononana UI.
2 fampahalalana sarotra
Izy io dia ilay interface interface an'ny lshw, fitaovana fibaikoana baiko izay efa noresahintsika tamin'ny antsipiriany lahatsoratra hafa ampiasaina hanehoana ny mombamomba ny fitaovana ampiasaina.
En Debian / Ubuntu ary ny derivatives:
sudo apt-mahazo mametraka lshw-gtk
En Fedora ary ny derivatives:
sudo yum hametraka lshw-gui
yaourt -S lshw-gtk
Amin'ny disto rehetra, mihazakazaha lshw-gtk fotsiny hanombohana ny programa. Ao amin'ny Fedora, ny baiko hampiasa dia lshw-gui.
HardInfo dia mampiseho antsipiriany momba ny fitaovana ampiasaina, saingy, tsy toy ny lshw, mampiseho zava-misy mahaliana momba ny rafitra fiasa ihany koa: ny famahana ny efijery sy ny fampahalalana mifandraika amin'izany, ny kinova kininina, ny anaran'ny solosaina ary ny mpampiasa ankehitriny, ny tontolon'ny birao, fotoana fohy, modely kernel miasa, fiteny misy, fampahalalana momba ny rafitra fisie, sns.
Raha ny momba ny fampahalalana momba ny fitaovana dia tsy dia feno antsipiriany noho ny lshw izy io fa mora kokoa noho ny interface tsara kokoa.
Toy izany koa, hardinfo mamela ny fihazakazahana fitsapana fampisehoana samihafa (benchmarks):
FPU: FFT sy Raytracing
Toy ny amin'ny lshw, ny fampahalalana rehetra dia azo aondrana amin'ny rakitra an-tsoratra (TXT) fotsiny na amin'ny pejy HTML. Na izany aza, tsy maintsy hamafisina fa ny valiny farany dia tsara lavitra noho ny lshw satria mazava kokoa ny fampahalalana, tsara kokoa ny vondrona, sns.
sudo apt-mahazo mametraka hardinfo
sudo yum mametraka hardinfo
sudo pacman -S hardifo
Sysinfo dia fitaovana mandroso kokoa noho ny System Monitor izay tonga amin'ny toerana misy azy saika amin'ny fizarana rehetra, koa aza manantena zavatra be loatra. Na izany aza, safidy maivana sy minimalista izy raha ny amin'ny fahazoana fanazavana feno bebe kokoa momba ilay rafitra.
sudo apt-mahazo mametraka sysinfo
yaourt -S sysinfo
Raha te hahita lisitr'ireo baiko sy safidy hafa hahalalana ny fampitaovana ao amin'ny rafitrao dia azonao atao ny mamaky ity lahatsoratra taloha ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Fitaovana 3 hahafantarana ny fitaovan'ny rafitrao
Pacoeloyo dia hoy izy:
Vaovao tsara fa fanamarihana fotsiny ary manantena aho fa tsy handray izany amin'ny fomba diso ianao, fa tsy ubuntu sy derivatives dia tokony ho Debian sy derivatives, ary hoy aho misaotra ny vaovao
Mamaly an'i Pacoeloyo
Alexander Nova dia hoy izy:
Tena gaga aho fa tsy mahita an'i KInfoCenter eto
Valiny tamin'i Alejandro Nova
metalus dia hoy izy:
Tena ilaina sy mahaliana.
Mamaly an'i metalus
Kuktos dia hoy izy:
Mamaly an'i Kuktos
Ary afaka mahafantatra antsipiriany momba ny fahatsiarovan'ny RAM an'ny pc aho koa ve aho?
Placeholder sary Gabriel Llorens dia hoy izy:
Salama, ahoana no ahafahako mampiasa ny hardinfo avy amin'ny tsipika fandidiana hitadiavana benchmarks? Misaotra betsaka!!
Valiny tamin'i Gabriel Llorens
Fanolorana ny fanesoana amin'ny famolavolana bilaogy vaovao
Isan-karazany: fitaovana hanovana automatique ny temotra